Ny Pixel 4 sasany dia manana olana miadana rehefa manokatra rindranasa | Androidsis
Ny Pixel 4 sasany dia manana olana miadana
Efa ho roa herinandro lasa izay ny Pixel 4 dia nahatratra ny tsena tamin'ny fomba ofisialy. Tao anatin'izay herinandro izay dia efa nahita olana tamin'ny fikirakirana tao amin'ireo telefaona Google ireo izahay. Ny olana vao tsy ela dia ny tahan'ny fanavaozana ny efijery, izay raikitra amin'ny fanavaozana. Izao dia manana olana amin'ny fampisehoana amin'ny kapila sasany izahay.
Toa misy mpampiasa izay miaina ny fomba fiasan'ny Pixel 4 miadana tokoa izy ireo. Raha ny fanatanterahana hetsika mahazatra, toy ny fanokafana rindranasa dia miadana be ny telefaona. Olana manelingelina izay efa misy fiantraikany amin'ny mpampiasa maro amin'ny fitaovana Google.
Ity dia zavatra iray izany dia mitranga amin'ny fampiharana rehetra napetraka amin'ny Pixel 4. Na ny fampiharana tsotra sy maivana indrindra aza dia maharitra segondra maromaro vao hisokatra amin'ny telefaoninao. Tsy zavatra mahazatra, ary tsy isalasalana fa miteraka fahasosorana eo amin'ireo mpampiasa izay iharan'ny tsy fahombiazan'ny fitaovana.
Amin'ny dinika an-tserasera dia hitantsika fa vitsy ny mpampiasa voakasik'izany. Hatreto dia mbola tsy nanome valiny i Google, ka tsy fantatsika na mahafantatra ny tsy fahombiazana na tsia ny orinasa. Angamba efa fantatrao, mahita ireo fitarainana maro avy amin'ireo mpampiasa izay mijaly amin'izany.
Tsy fantatra koa ny niandohany. amin'ity fihenam-bidy ity ao amin'ny Pixel 4. Ka zavatra iray izay azo antoka fa hanasarotra ny vahaolana. Na dia ny zavatra azo antoka indrindra aza dia hiafara amin'ny famoahana fanavaozana ho an'ny telefaona i Google, hany ka hadinon'ireo mpampiasa izany olana izany.
Tsy maintsy miandry kely kokoa isika fantaro ny antony mahatonga an'io tsy fahombiazana io ao amin'ny Pixel 4. Mba hisian'ny fanehoan-kevitra ofisialy avy amin'ny Google ihany koa, ho fanampin'ny famoahana ny vahaolana tsy ho ela. Satria tsy eken'ny telefaona ambony toa izao ny manana olana toy izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ny Pixel 4 sasany dia manana olana miadana
Xiaomi dia manamafy ny fisian'ny Mi Note 10